Sawirro: Soomaaliya oo jawaab celin ka bixisay dacwaddii Kenya ay hordhigtay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda “Akhriso” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Sawirro: Soomaaliya oo jawaab celin ka bixisay dacwaddii Kenya ay hordhigtay Maxkamadda...
Sawirro: Soomaaliya oo jawaab celin ka bixisay dacwaddii Kenya ay hordhigtay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda “Akhriso”
Waxaa ay ka mahadcelisay abaalka ay Kenya shalay sheegatay in ay u gashay Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu dambeysay ciidammada dalkeeda ka jooga Soomaaliya. Waxaa kale oo ay u mahadcelisay dhammaanba dalalka kale ee Afrikaanka ah iyo kuwa kaleba ee gacanta siiya Soomaaliya.
Ka dib Mona waxay sheegtay in Soomaaliya ay maanta awood u yeelatay in ay xuquuqdeeda ay daafacdo, iyada oo u mareysa nidaam caalami ah oo lagu xalliyo khilaafaadka. Xuuqdaas oo ay ka mid tahay xuquuqda badda iyo kheyraadkeeda. Maaddaama aan ka mid nahay ayay tiri dalalka adduunka ugu saboolsan, kheyraadka baddu waa hanti Qaran oo halbowle ah, aadna muhiim ugu ah horumarka mustaqbalka iyo xasilloonida dalkayaga. Waa kheyraad xaqiijin kara ayay tiri in horumarka dalkayagu uu ku sii socdo hab dadka Soomaaliyeed oo dhan faa’iido ugu jirto.
Haddana awooddii aan u heli lahayn in aan kheraadkaas ka faa’iideysanno iska daaye xataa in aan baarno oo aan ogaanno meesha laga heli karo, waxaa naga hor taagan soohdin badeedda annaga iyo Kenya oo aan asteysneyn. Mona waxay sheegtay in ay Soomaaliya is xakameysay, oo ay ka gaabsatay in ay wax howl ah ka fuliso aag badeedka lagu muransan yahay. Waxaa wax laga xumaada ah, ayay tiri Mona, in taa cagisgeed ay Kenya u dhaqantay sidii iyada oo aagga lagu muransan yahay ay iyadu leedahay. Waxay heshiisyo la gashay sharikado shidaalka baara oo haddadaas ku guda jira baaritaan.
Qareennada Soomaaliya waxaa hadalkooda soo gunaanaday Prof. Philippe Sands. Isaga oo hadalkiisa ku wajahaya Guddoomiyaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda wuxuu yiri, waxaan rajeynayaa in aad aragto in Kenya diidmada hordhaca ah ee Kenya aad u aragto waxa ay tahay; waa in ay sii dheereyso xaalad aan caddaalad ku dhisneyn oo bilaa mada’ ah. Kenya waxay dooneysaa in ay dacwadda is hortaagto si ay u furto wadahadal aan dhammaad lahayn, muhiimad looga qeyb galaana aanay jirin.
Isu-geyn Qareennada Soomaaliya waxay tusaale u soo qaateen kiisas badan oo ah dacwado ay Maxkamaddani u qaadday dalal bad isku haysta. Mid kastana meel ayay tilmaameen uu kiiska Soomaaliya kala mid yahay dalkii ku guuleystay dacwad kasta oo ay tusaale u soo qaateen.
Berri galab 16:30 wakhtiga Hague ayaa waxaa billaabanaya wareegga labaad ee dhegeysiga diidmada Kenya. Waxaa diidmo afka ah mar kale soo jeedin doona ergada Kenya. Halkan kala soco habeen dambe haddii eebbe idmo.
W/Qoray: Yuusuf Garaad Cumar